WhatsApp dia mampihena ny fotoana hamafana hafatra hatramin'ny roa minitra | Vaovao momba ny gadget
WhatsApp dia mampihena ny fotoana hamafana hafatra hatramin'ny roa minitra
Ny fahafahana mamafa ny hafatra amin'ny WhatsApp dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo vaovao andrasan'ny mpampiasa sasany hatrizay mahazatra tokoa ny mandefa hafatra amin'ny vondrona diso ary bebe kokoa raha iray amin'ireo manana vondrona maro ao amin'ilay fangatahana izahay. Ny tena marina dia tsy ratsy ihany koa ny fepetra fampihenana ny fotoana hamafana ny hafatra, satria matetika no tsapantsika fa nanao ny vondrona diso isika nefa tsy maninona ihany koa ny manana fotoana bebe kokoa hanitsiana ilay hafatra raha sendra diso isika . Tamin'ny fiandohan'ny kinova beta, ny fotoana hamafana hafatra amin'ny WhatsApp dia 29 minitra ary efa nihena be izao.
Mba hamafana ireo hafatra dia tsy voatery namaky ilay hafatra ilay mpandray ary afaka mamafa ny lahatsoratra, sary na horonan-tsary isika. Ity no bitsika niavaka tao amin'ilay kaonty tamin'ny fampiharana fandefasan-kafatra, Fampahalalana WhatsApp Beta mampitandrina antsika amin'ireo fanovana ireo:
WhatsApp dia nanova ny fotoana voafetra handefasana hafatra: miaraka amin'ilay fanovana vaovao, azo atao ny mandefa hafatra nalefa tao anatin'ny 2 minitra!
- WABetaInfo (@WABetaInfo) Diaben'ny 24 tamin'ny 2017
Amin'ny voalohany Mbola miandry anao izahay hampandeha ity fampiasa ity amin'ny alàlan'ny fanavaozana Ary avy eo hitantsika fa mandeha tsara ihany koa io safidy io, izay efa hitantsika fa misy amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra hafa ary fantatro izany, tsy misy fetrany fotoana amin'ny famongorana ireo hafatra. Mba hamafana ireo hafatra tadiavintsika dia tsy maintsy tsindrio eo isika hampisehoana ny menio ara-nofo ary hiseho ny safidy hamafana ny hafatra. Fantatrao izao, raha manana lesoka ianao rehefa mandefa hafatra avy amin'ny WhatsApp dia hanana minitra roa fotsiny ianao hamafana azy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Software » WhatsApp dia mampihena ny fotoana hamafana hafatra hatramin'ny roa minitra
Araho ny fampisehoana ny Samsung Galaxy S8 mivantana
Forocoches, ny forum afaka manao ny ratsy indrindra sy ny tsara indrindra